Kasain’i Timor-Leste haverina ampiharina ny lalàna manameloka ny fanalambaràka, na eo aza ny ahiahy momba izay fiantraikany amin’ny fahalalahana maneho hevitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2020 15:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Italiano, русский, Ελληνικά, Español, Português, English
Fampianarana mampiasa solosaina ao Timor-Leste. Sary an'i José Fernando Real. Wikimedia Commons. (CC BY-SA 4.0)
Nilaza ny ahiahin-dry zareo ny media sy ny fiarahamonim-pirenena ao Timor-Leste momba ny mety hamerenana indray ilay lalànan'ny heloka bevava momba ny fanalàmbaràka ao amin'ny firenena.
Ny 5 Jona, nambaran'ny Minisitry ny Fahasalamàna fa ilay volavolan-dalàna, izay heveriny ho atolotra ny Filankevitry ny Minisitra, dia hamerina ny lalàna famaizana ao anatin'ny fanenjehana ny fanalàmbaràka, izay nesorina rehefa nolanian'ny governemanta ilay Lalàna Vaovao momba ny Asa Fanaovana Gazety tamin'ny 2014.
Araka ilay drafitra, izay rehetra olona “milaza/manosotra olona iray hafa ho nanao zavatra iray, na fanehoankevitra iray manohintohina ny voninahiny sy ny hajany, na mampita izany amin'ny hafa koa avy eo” dia azo tazonina ho nanao heloka bevava nanala baràka ihany koa. Sazy famonjàna herintaona na sazy ara-bola no miandry, saingy mety hahazo hatramin'ny telo taona ireo mankahatra izany raha toa ka mpiasam-panjakana ilay mitory, na raha toa natao tamin'ny alàlan'ny fampahalalambaovao mahazatra na ny media sôsialy ilay fanambaràna manala baràka. Na iza na iza olona manala baraka orinasa iray, na manampahefana fahiny tao amin'ny governemanta, na olona iray efa nodimandry koa, dia hiatrika fanamelohana araka ny lalàna ihany koa.
Tanisain’ilay antontan-kevitra ny fampiasàna betsaka ny media sôsialy ho toy ny iray amin'ireo antony nitondràna fanitsiana ny lalàna famaizana:
…amin'ny alàlan'ny media sy tambajotra sôsialy, vao mainka mihamafy ny fanohintohinana ny voninahitra, ny fahamendrehana sy ny laza, izay misy fiantraikany mafimafy kokoa amin'ny fahamendrehan'ny olona nokinendry, sy koa ny fahamendrehan'ny fanjakàna, izay tokony ihany koa ho sarotiny sy ho tomponandraikitra amin'ny fiarovana ny maha-izy azy.
Saingy ilay filoha taloha tao Timor-Leste ary efa nahazo ny Loka Nobel, José Ramos-Horta, dia nampitanddrina ny governemanta momba ny mety ho fiantraikan'ilay tolodalàna amin'ny fahalalahana maneho hevitra. Nametrahany fisalasalàna ihany koa raha ho rariny ny hametrahana ireo olana misy ho eo an-tsoroky ny fampiasàna midadasika be ny media sôsialy:
Tsy hitako hoe tamin'ny fomba ahoana no nanohintohina ny filaminana, ny fandriampahalemana na ny fivoaran'ny firenena sy ny fahamendrehany ary ny lazan'ny governemanta, ny niparitahan'ireo tambajotra sôsialy nandritra ny taona marobe.
Raha tsy tiantsika ny tambajotra sôsialy hanao tatitra momba ireo zavatra manahiran-tsaina mety hampihetry voninahitra, ndeha isika hitondra tena mifanaraka amin'ny fahalalampomba
Ilay fehezanteny farany dia manondro fifandonana iray nahery setra nitranga teo amin'ireo mpikambana ao amin'ny antenimiera nandritra ilay fitorevahana tamin'ny May.
Nohamafisin'ny vondrona La’o Hamutuk ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena, tamin'ny 15 Jona, tao anaty fanambaràna iray nataony ho an'ny governemanta fa “tsy tokony hatahotra hiteny an-kalalahana ny marina ny vahoaka.” Nampitandrina momba ny mety ho fiantraika goavana aterak'ilay tolodalàna any amin'ireo olompirenena tsotra ihany koa ilay vondrona:
Loza mitatao ho an'ny rehetra io tolodalàna io, indrindra fa ireo olona marefo tsy manana fifandraisana politika na tsy manam-bola. Azon'ilay lalàna tampenana ny vavan'ireo vehivavy niharan'ny herisetra na fanararaotana ara-nofo, ary sakanany izy ireny tsy hanoratra na hiresaka momba izay zavatra niainan-dry zareo rehefa tsy ananana porofo azo tsapain-tànana.
Nampian'i La’o Hamutuk fa mety ho ampiasain'ireo manampahefana ihany koa io lalàna io mba hanohintohinana ny asan'ireo vondrona avy amin'ny fiarahamonim-pirenena:
Raha toa isika manosoka hevitra miteny fa loza mitatao ho an'ny ain'ireo olompirenena ny pôlitika ankalazain'ireo pôlitisiana handaniana vola an-jatony tapitrisa maro mba hanaovana làlana na seranam-piaramanidina, fa tsy ho an'ny fahasalamàna na fanabeazana, mety hametraka fitoriana hanenjehana antsika ve ny governemanta? Raha toa isika manohitra ny fitarihana ao anivon'ny tafika mitam-piadiana mba hamerana ny fampielezankevitra ho an'ny fifidianana, hanatitra antsika ho any am-ponja ve ny fanjakàna?
Nokianin'i Virgilio Guterres, filohan'ny Filankevitry ny Asa Fanaovana Gazety ao Timor-Leste Press, ny “fitsapankevibahoaka an-kamehana” sy ny fotoana tsy mety loatra nampidirana io fepetra io, “ anatin'ny fandalovan'ny firenena ny vaninandron'ny hamehana izay ny ankamaroan'ny vahoaka no mampifantoka ny ahiahiny amin'ireo fepetra fisorohana ny Covid-19.” Nampahatsiaviny ihany koa an'ireo manampahefana ny momba ny fanafoanana ny fahalalahana maneho hevitra nandritra ny ady nataon'ny firenena ho an'ny fahaleovantenany fony izy nobodoin'i Indonezia ny taona 1975 hatramin'ny 1999:
Nandritra ireo taona maro nibodoana azy, marobe ireo nogadraina noho ny resaka fahalalahana maneho hevitra. Mba hanomezana hasiny sy voninahitra ireo sorona maro, tsy maintsy iantohantsika ny hoe tsy hisy intsony olompirenena hogadraina noho ny fanehoany hevitra na noho izy manana hevitra mifanohitra.
Ny Sendikan'ny Asa Fanaovana Gazety ao Timor-Lest dia niampanga ny governemanta ho miezaka ny hanampim-bava ny mpanakiana:
Ezahan'ny fanjakana ampiasaina ilay vanimpotoanan'ny hamehana mba hampandaniana ilay tolodalàna, ka ikendrena hanasaziana ireo izay mamelively mafy ny mpitarika sy ny politisiàna, saingy raha ny hevitray, natao io hanamelohana ireo mpanao gazety sy ireo olompirenena mba tsy hanakianany ny governemanta.
Jane Worthington, talen'ny Federasiôna Iraisampirenen'ny Mpanao gazety, faritra Azia-Pasifika (IFJ) dia nanasongadina andalana iray manaitra ao anatin'io tolodalàna io.
Misy tsy voafaritra mazava tsara ny atao hoe “fanohintohinana” ao anatin'io lalàna natolotra io ary manisaka ny fifantohan'izay mpitaraina ho any amin'ny mpanao gazety sy/na mpanonta mba ‘hanaporofoana’ ny anton'ilay fitoriana. Raha lazaina tsotra, io dia mametraka ny vesatry ny lalàna amin'ny fanaporofoana ny tantara iray hoe marina ho an'ny mpanao gazety sy/na ny mpanonta.
Jim Nolan, manampahaizana manokana momba ny lalàna avy ao amin'ny IFJ any Azoa-Pasifika, nanamarika fa efa ananan'i Timor-Leste sahady ny rafitra sy fomba fiasa hiatrehana ireo fitarainana anenjehana ny tatitry ny media nefa tsy manameloka ny fahalalahana maneho hevitra.
Nanome toky an'ireo mpiara-misehatra aminy ny governemanta fa hamerina hijery ireo fanehoankevitra sy sosokevitra rehetra, na ny mpomba na ny mpanohitra ilay fepetra.